ငါ့ကျမှ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ဖြစ်နေရတာလဲ ? – Lifestyle – Duwun
ငါ့ကျမှ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ဖြစ်နေရတာလဲ ?
အရင်ဆုံး စိတ်ရှုပ်စရာတွေကို လေနဲ့ အတူ ဖူးခနဲ မှုတ်ထုတ်လိုက်ပါဦး
Lily 2017-03-17 13:41:04.0, 2017-03-17 13:41:04.0
စိတ်ထဲမှာ အပြစ်မြင်နေတာတွေနဲ့ ဝမ်းနည်းစရာတွေ တွေးနေတာ ရပ်လိုက်ပါတော့။ မွေးကတည်းက ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်စုံနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက် တစ်မျိုးစီတော့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ ရှိကြတာပဲ။ သူက မချမ်းသာပေမယ့် မိသားစု စုံစုံလင်လင်နေရတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ အရမ်းချောလှနေပေမယ့် အချစ်ရေး ကံမကောင်းရှာဘူး။ ဉာဏ်ရည် ထက်မြက်နေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် အစွမ်းအစတွေကို ထုတ်ပြဖို့ အခွင့်အရေးအတွက် ကံက ပါမလာသူတွေရှိတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက လိုလေသေးမရှိ ရွှေပေါ်မြတင်နေရပေမယ့်လည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ကလေးမရနိုင်လို့ ဝမ်းနည်းနေရသူတွေ ရှိတယ်။
လူဆိုတာ သေရင် တစ်ယောက်တည်းမို့ အားလုံး ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ်ပါ။ ဒီလို အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို လိုက်တူအောင် ညှိလို့ မရသလို တူလာမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တူချင်သပဆိုလည်း မရမက ဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစားလိုက်ပါ။ ငါ့ ဘဝလေး သနားပါတယ် လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့သူတွေကို အဆိုးမြင်တဲ့ဘက်ကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ အခုရှိနေတာတွေကို မကျေနပ်နိုင်ဖြစ်မနေဘဲ အခြေအနေအမှန်ကို လက်ခံလိုက်ပါ။ လိုချင်တာတွေ မများတော့လဲ ရှိတာလေးနဲ့ ရောင့်ရဲလိုက်ပါ။ မလိုချင်တာ ချမ်းသာတယ် ဆိုသလိုပေါ့။ သင့်အခြေအနေထက် အများကြီး အများကြီး ပိုဆိုးတဲ့ ဘဝမှာ နေထိုင်နေရပြီး နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံးပန်းနေရသူတွေ ရှိနေတာကို တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး သူတို့က ငါ့ထက် ပိုဆိုးတာပဲ ဆိုပြီး ဒူးလေးနန့်နေဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ပင်ပန်းတာတွေ မကျေနပ်တာတွေ နည်းနည်း ဖြေသာအောင် တွေးကြည့်ဖို့ ပြောတာပါ။ ဘဝ တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ အမြဲရောင့်ရဲနေလို့လည်း မရတဲ့အခါမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အခြေအနေကို ပြန်လည်စမ်းစစ်ကြည့်ပြီး အမြဲတမ်း လဲနေရာကနေ ပြန်ထနိုင်တဲ့ အင်အားတွေ သူများထက် ပိုရှိနေတာကို အမှတ်ရ၊ သတိရနေအောင်လို့ပါ။
လူတွေ အပေါ်ကောင်းနိုင်ဖို့၊ သူများတွေကို ကူညီနိုင်ဖို့ဆိုတာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အဆင်ပြေနေမှ ကူညီနိုင်မှာ မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရင်ဆုံး ကူညီတတ်ပါစေ။ သင့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အထောက်အကူတွေနဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေကို သူများတွေက မပေးဘူးဆိုပြီး တွေးပြီး ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်နေ၊ စိတ်တိုနေရတာလား။ မျက်ရည်တွေ ရွဲနေတဲ့ ခေါင်းအုံးကြီးကို ဖက်ပြီး နောက်ဆုံးတော့ အိပ်ပျော်သွားတာပဲ မဟုတ်လား။ ကိုယ့်အတွက် အိမ်က အဖေ၊ အမေ၊ ချစ်သူက သွားစရာရှိတာကို လိုက်မပို့နိုင်ကြောင်း၊ လိုချင်တာကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်း၊ မပံ့ပိုးနိုင်ကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ရင်ဖွင့်ရတာ မပင်ပန်းဘူးလား။ သူတို့လည်း အဆင်ပြေနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ ပဲလေ။ အကူအညီလိုနေတယ် မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သာ အကူအညီရအောင် ရှာဖွေကြံဆပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကူညီလိုက်ပါ။
A Better You, A New You
"ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ၊ အာဟာရကို ပြည့်ဝအောင် စားပါ" ဆိုရင် နားထဲမှာ ရိုးအီနေပြီး လုပ်ချင်စရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလို့ကို မထင်ကြတော့ပါဘူး။ တကယ်က စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါဖို့ ဆိုရင် သင့် ခန္ဓာကိုယ်က လှုပ်နိုင်ရှားနိုင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ သင့်စိတ် ခိုလှုံရာ ခန္ဓာကိုယ်က သင့်အိမ်လေးတစ်လုံးဆိုရင် သင့် အိမ်လေးကကော ခိုင်ခန့်ရဲ့လား။ လေလုံ၊ မိုးလုံကော ရှိရဲ့လား။ လေတိုက်ရင် မလဲ မပြိုနိုင်တာကော သေချာရဲ့လား။ ထုနဲ့ ထည်နဲ့ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ရှိရဲ့လား။ မရှိသေးဘူးဆိုရင် အခုကစပြီး ပစ္စည်းအကောင်းစားတွေ သုံးပြီး အိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးလောက် ဆောက်ထားဖို့လုပ်ပေါ့။ ပြောချင်တာက ကောင်းကောင်းစား၊ ကောင်းကောင်းအိပ်၊ အားရှိအောင်နေ၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုရှိအောင် ဂရုစိုက်ပါ။